Isicelo esisemthethweni seXbox Live se-Android sisunguliwe | I-Androidsis
I-Xbox Live ngoku iyafumaneka kwi-Android
Ngelixa sele ikho bekukho izicelo de I-Xbox Live ye-AndroidInyani yile yokuba zonke ziphuhlisiwe ngabantu besithathu, kwaye iMicrosoft yayigcine isicelo sayo esisemthethweni se-iOS kunye neFowuni yeWindows. Ngethamsanqa, oku akusekho njalo, njengoko isigebenga sikaRedmond ekugqibeleni sithathe isigqibo sokuzisa iqonga lomdlalo wevidiyo kwi-Intanethi.
Ngaphantsi kwegama I-Xbox Live yam, Esi sicelo sivumela abadlali beXbox 360 ukuba bafikelele kwiakhawunti yabo yeXbox Live kwiselula ye-Android. Ngokucacileyo ayisetyenziswanga ukudlala okanye nantoni na esondeleyo kuloo nto, nangona kunjalo, kuluncedo kakhulu ukuba nazi iinombolo zethu kwaye sizithelekise nezabanye abasebenzisi, kunye nokujonga imeko ye-intanethi yabahlobo bethu, efanelekileyo Ityala silinde kuphela umntu esisebenza naye ukuba aqhagamshele ukumema ukuba adlale.
Ukusuka kwisicelo esinye sinokubona ezona trailers zibalaseleyo zomdlalo, sebenzisa inkonzo yemiyalezo kwaye uhlele lonke ulwazi lweprofayile yomsebenzisi. Kodwa enye yezona zinto zinomtsalane kukwazi ukubona eyethu I-Xbox 3 360D Avatar kwaye uyihlelele kunxibelelwano olufanayo, ukwazi ukuguqula inkangeleko yayo, iimpahla ezinxibileyo, kunye nezixhobo zayo kunye nezinto, njengoko besinokukwenza kwideshibhodi yedesktop yethu.
I-Xbox Live ine-interface ecocekileyo kwaye ilula, kufutshane kakhulu ne Ujongano lweMetro iMicrosoft ibisebenzisa kwiimveliso zayo zamva nje, kubandakanya ideshibhodi yeXbox 360. Kwaye ngelixa olu hlobo lwenza ukuba usetyenziso luzive lungaphandle kwendawo xa kuthelekiswa noyilo lwe-Android, ubuncinci iicomputer zabadlali bakaMicrosoft baya kuba nakho ukuqhelana ngokukhawuleza nonxibelelwano nako konke ukuhamba kwayo.
Isicelo sam seXbox Live sinokukhutshelwa simahla kuGoogle Play. Ngokucacileyo, eyona nto ifunekayo kukuba ube ne- Akhawunti Xbox Live.
Iinkcukacha ezithe xaxe - I-Xbox 360 Live ye-Android
Imvelaphi I-Xbox Live yam - Google Play
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » I-Xbox Live ngoku iyafumaneka kwi-Android